पल्सर सिरिजको सबैभन्दा कान्छो पल्सर १२५ को बिक्री सुरु मासिक ६ हजार रुपैयाँ किस्तामा ! – AB Sansar
November 8, 2020 adminLeaveaComment on पल्सर सिरिजको सबैभन्दा कान्छो पल्सर १२५ को बिक्री सुरु मासिक ६ हजार रुपैयाँ किस्तामा !
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको लागि नेपालका लागि आधिकारिक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले केही समय अगाडि पल्सर सिरिजको सबैभन्दा कान्छो पल्सर १२५ को बिक्री सुरु गरेको थियो । यसलाई ग्राहकले मासिक ६ हजार २५५ रुपैयाँ किस्ता तिर्नेगरि खरिद गर्न सक्ने छन् । हालै मात्र कम्पनीले ल्याएको नयाँ योजनामा यो मोटरसाइकल ग्राहकले विभिन्न तीन स्कीममा खरिद गर्न सकिने छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****
कम्पनीले नगद छुट, शून्य प्रतिशत व्याज तथा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट जस्ता स्कीम रहेको छ । यो मोटरसाइकलको मूल्य २ लाख २४ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर किन्दा ग्राहकले यो मोटरसाइकलमा १२ हजार नगद छुट प्राप्त गर्ने छन् । दुई बर्षको अवधिमा किस्ता चुक्ता गर्नु पर्ने यो योजनमा १६ प्रतिशत व्याज लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसको मासिक किस्ताको बारेमा बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
यसैगरि शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा मोटरसाइकल खरिद गर्दा ग्राहकले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी खरिद गर्दा लाग्ने मासिक किस्ता तथा डाउन पेमेन्ट बारे थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । यस्तै ग्राहकले बजाज पल्सर १२५, २० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट गरेर समेत खरिद गर्न सक्नेछन् । यो योजनामा ग्राहकले मोटरसाइकल खरिद गर्दा बाँकी रकम २ बर्ष भित्र तिर्नु पर्ने हुन्छ । यो योजनमा ग्राहकले १७ प्रतिशत व्याजदर तिर्नु पर्ने छ । २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा पल्सर १२५ खरिद गर्दा लाग्ने शूल्कको बारेमा थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****
अभिनेत्री निशा घिमिरेलाई भेट्नशंकर बिसी सहित उहाँको सम्पूर्ण टीम सहयोग सहित